Akwụsịla ụkọchukwu katọliki ọrụ maka idine nwaanyi Amerika | odumblog
Akwụsịla ụkọchukwu katọliki ọrụ maka idine nwaanyi Amerika
posted on Jun. 19, 2019 at 9:59 pm
Katolik dayosis nke Pittsburgh dị na ‘United States’ akwụsịla ụkọchukwu onye Naijiria, Cyprian Duru ọrụ izi ozi ọma maka idine nwaanyi. Onye boro ya ebubo a bụ Kathy Coll, onye nkuzi asụsụ bekee dị afọ iri isii na asatọ. Amachikwara Cyprian iyi akwa ndi ụkọchukwu ma ọ bụ gosi onwe ya dịka ụkọchukwu.
N’akụkọ Coll, ọ gwara ndi okaiwu na Duru kwụsịrị n’ụlọ ya n’ọnwa Decemba, 2016. O kwuru na Duru mere ka ọ bịara inye ya akwụkwọ ekeresimesi. Ma mgbe ha batara n’ime ụlọ, o jidere ya ma dinee ya. Mkpu niile o tiri akwụsịghị Duru ime ihe ọ chọrọ ime.
Coll kwuru na kemgbe ihe a mere, ihere ekwebeghi ya kọsara onye ọzọ. Ọ gbaliala ime ka ọ mara ma ọ ga-enwete ọgwụgwọ maka ihe a merenu. Ọ buzi mgbe ọ gwara onye ozi ya ka o mere ka dayosis mara ihe mere.
Ka ọ dị ugbu a, ọ na-ahụ dọkịta na-enyere ya aka inweta onwe ya.
Gọọmentị Etiti ewepụtala Ụbọchị Wenezdee dika Ụbọchị Ezumike
Odum Blog4 hours ago